Ithegi: IRejista esemgangathweni | Martech Zone
Ithegi: IRejista esemgangathweni
Ividiyo: Apha: Dibanisa iVidiyo nakwesiphi na isicelo
NgoLwesibini, Januwari 19, 2010 Douglas Karr
Enye yeenkampani ezinobabalo endisebenza nazo yiCantaloupe. Banemveliso engakholelekiyo ebizwa ngokuba yiLightlight esiza kubamba iividiyo zethu nayo. Inkqubo ibonelela ngomgangatho omangalisayo wokubamba iividiyo zakho ezikwi-Intanethi, ikubonelela ngobunini kwezi vidiyo, kwaye inecandelo lokudibanisa elinyanzelisayo elikuvumela ukuba ubeke amakhonkco bukhoma kumda wevidiyo yakho. Idityaniswe nolunye uhlalutyo lwevidiyo, yiphakheji eyomeleleyo! Abantu abakhulu eCantaloupe